IATA Inotangisa Yekusimudzira Sustainability Kudzidzisa Chirongwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » IATA Inotangisa Yekusimudzira Sustainability Kudzidzisa Chirongwa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Kunyangwe kugadzikana kwaita basa rakakosha muindasitiri kwemakore mazhinji, ndicho chinhu chakakosha sezvo chikamu chichivaka patsva kubva pamhedzisiro yedenda re COVID-19.
IATA yanga ichipa kudzidziswa kweindasitiri yekuvhiya kubva muna1972.
IATA kharikhulamu inovhara zvinopfuura mazana matatu emakosi anotorwa nevanopfuura 350 100,000 vatori vechikamu pagore.
Iwo akasiyana ma module akagadzirwa kuratidza kuti zviito zvega zvega uye nemitero yekambani kuita kusagadzikana.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakatanga chirongwa chekudzidzisa zvekuchengetedza nharaunda pamwe ne Yunivhesiti yeGeneva (UNIGE). Kunyangwe kugadzikana kwaita basa rakakosha muindasitiri kwemakore mazhinji, ndicho chinhu chakakosha sezvo chikamu chichivaka patsva kubva pamhedzisiro yedenda re COVID-19. Mune ongororo ichangopfuura yevanopfuura mazana masere evashandi vemaindasitiri ekudzidzisa, kusimudzira kwakaratidzwa sechinhu chepamusoro chekudzidzisa, kuitira kuona kuti vashandi vanogona kuwana hunyanzvi hwakakosha hwehunyanzvi nekushanda, asiwo hunyanzvi hunodiwa.
Iyo IATA - UNIGE Chitupa chePamberi Zvidzidzo (CAS) muKuchengetedzwa Kwemagariro muAviation ine mamodule matanhatu anofukidza misoro inotevera:
Dhizaina Sustainability Strategy
Environmental Management Systems muAviation
Sustainable Aviation Mafuta
Kambani Yemagariro Mutoro uye Masangano Etsika
Carbon Misika uye Aviation
Iwo akasiyana ma module akagadzirwa kuratidza kuti zviito zvega zvega uye nemitero yekambani kuita kusagadzikana. Vatori vechikamu vanodzidza kuona seti yematanho ayo anogona kuitiswa kusimudzira kugadzikana mune ipfupi, yepakati, uye yakareba-kwenguva. Chirongwa ichi chinosanganisa makosi akasarudzika ezvemamiriro ekunze pamwe nehukama hwehukama, hunhu hwehurongwa uye hutungamiriri hwakavimbika, nechinangwa chekubvumidza vatori vechikamu kuti vawane mhinduro dzavo kune izvo 'kutungamira zvine mutsindo' zvinoreva kunzvimbo yavo yebasa uye maitiro ekuita sarudzo zvine mutsindo uye dzivisa upofu hwetsika.
“Vashandi vezvemuchadenga vane hunyanzvi zvakanyanya sezvo vachida kushanda nekutevedzera zviyero zvakawanda zvepasi rose nemaindasitiri. Kwemakore tave tichichinjisa yedu yekupa yekupa kuti izadzikise zvinoshandurwa zvinodiwa zveindasitiri. Nekudaro hazvifanirwe kutishamisa kuti isu tave kuwedzera kudzidziswa kwekusimudzira kwezvakatipoteredza pakudzidza kwedu. Kuve nechokwadi chekuti vese vanoshanda muindasitiri iyi vanopihwa mukana wekuwana hunyanzvi hutsva hwakakosha, sezvo isu tichiwedzera kuisa simbiso pakuita kuti mashandiro edu anyatsogadzikana, tichivaka patsva kubva pamhedzisiro yedenda re COVID-19, "akadaro Willie Walsh, Mutungamiriri Mukuru weIATA.
IATA yakasarudza shamwari yayo yemakore yakareba yakadzidza UNIGE kugadzira kosi iyi sezvo izvi zvichibvumidza musanganiswa wakasarudzika wehunyanzvi hwehunyanzvi hweUNIGE uye ruzivo rweindasitiri rweIATA. Chikamu chezvemagariro muchirongwa ichi chinodzidzisa nekugadzirira vatungamiriri venguva yemberi pamusoro pebasa rinozobatsira mukugara kweindasitiri yendege nenzanga yose.
Iwo kudzidziswa kunopihwa semunhu module uye kana izere pasuru yeese matanhatu. Makosi anoendeswa kuburikidza neakararama chaiwo makirasi, ichipa chaiyo-nguva inofambidzana murairidzi-inotungamirwa online kudzidza uko vatori vechikamu vanogona kutaura, kuona, uye kukurukura mharidzo. Munguva yezvirongwa vatori vechikamu vanozobatanawo nezviwanikwa zvekudzidza ivo vachishanda vari mumapoka, vese vari pamhepo mamiriro.
IATA yanga ichipa kudzidziswa kweindasitiri yendege kubva muna 1972. Dzidzo yayo inovhara zvinopfuura makosi mazana matatu anotorwa nevatambi vanopfuura zviuru zana pagore. Iwo makosi anopihwa mune akasiyana mafomati senge mukirasi (kumeso-kumeso uye chaiko), online, nezvimwewo pamwe chete neanopfuura makumi mana nemakumi mana evadzidzi vekudzidzisa.